“Turkigu Wuxuu Somaliland ka Caawinayaa dhinaca Tamarta korontada” | Salaan Media
“Turkigu Wuxuu Somaliland ka Caawinayaa dhinaca Tamarta korontada”
October 14, 2013 | Published by: Hamse
Hargeysa (SM)- Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale, ayaa sheegay in dawladda Turkigu ay dalka Somaliland ka caawin doonto dhinaca horumarka, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha dhinaca Tamarta ee koronto dhalinta iyo qaybinteedaba.
Wasiirka Macdanta iyo Tamartu waxa kale oo uu sheegay muddadii weftigii madaxweynaha Somaliland hogaaminayay ee uu ka midka ahaa ay safarka shaqo ku joogeen dalka Turkiga in ay shirar iyo kulamo la yeesheen ganacsato waawayn oo maalgashadayaal ah, isla markaana danaynaya in ay maalgashadaan dalka Somaliland.
Mudane Xuseen Cabdi Ducaale isaga oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Haddii aan ka hadlo waxyaabaha ku saabsan maalgashiga ama khuseeya wasaaraddaydan hawlaheeda ee ku saabsan arrimaha Tamarta oo kale. Runtii shirar aad u muhiim ah ayaan la soo yeeshay niman maalgashadayaal ah oo aad iyo aad u danaynaya in ay maalgashi u sameeyaan dalka Somalilnad xaga tamarta.”
“Tamartu way ballaadhan tahay, waxaa ka mid ah Korontada dhalinteeda oo runtii aad iyo aad aynu diciif ugu nahay, aadna qaali ugu ah bulshada reer Somaliland oo aynu u baahanay in arrintaasi ay inoo furanto oo maalgashi badani yimaado, si korontada qiimaheedu inooga jabo,” ayuu yidhi Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamara Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale oo shalay waraysi siiyay telefiishanka Qaranka Somaliland.
Wasiirka Macdanta iyo Tamarta Somaliland oo faahfaahin ka bixinaya shirarka ay la yeesheen maalgashadayaasha Turkiga waxa uu yidhi “Runtii taa waxaanu la soo kulanay ganacsato waawayn oo maalgashadayaal ah, oo jecel in ay dalkeena yimaadaan oo ay eegaan waxyaabaha uga qabsoomi kara arrimaha maalgashiga dhinaca koronto dhalinta iyo qaybinteedaba. Markaa taasi waa mid aanu rajaynayno in ay yimaadaan nimankaasi oo aanu eegno sida aynu wax ula qabsan karno dal ahaan, taas oo ah faa’iido wayn.”
Mudane Xuseen Cabdi Ducaale waxa kale oo uu intaa ku daray “Waxyaabaha kale ee siyaasadda qaabilsan ama arrimaha kale ee waawayn, sdia uu madaxweynaheenu sheegayba, balan qaad ayaa jira ah in wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda dawladda Turkigu uu dalka yimaado, oo aad iyo aad ay ugu soo jeedaan sidii ay Somaliland u maalgashan lahaayeen ama ay wax inoola qaban lahaayeen xaga horumarka.
Markaa runtii wasaarad ahaan xaga tamarta waxaanu filaynaa in ay dalka yimaadaan wufuud muhiim ah oo aanu markaa la eegno sidii ay inoogu suuro geli lahayd in aynu wax wada qabsi la yeelano Turkiga dhinaca Tamarta,”ayuu yidhi Wasiirka Tamarta oo shalay u waramayay SLNTV.